Ahoana no hanambarana ny tsiambaratelon'ny sosokevitra Amazon?
Raha efa nividy zavatra tany Amazonia ianao dia tokony hahatsikaritra ny toro-hevitra omenao azy. Ohatra, ny fivarotana tsara indrindra na ny vidiny tsara indrindra amin'ny volana. Tokony ho fantatrao fa ireo hevitra sosialy ireo dia tsy mifanohitra. Izy ireo dia miorina amin'ny tahirin-kevitra sy statistika isan-karazany.
Ity rafitra fanolorana momba ny rafitra ankapobeny ity dia mifototra amin'ny isan'ireo singa tsotra - izay novidian'ny mpampiasa iray vao haingana tao Amazon, izay mamokatra mpampiasa iray ao amin'ny sarimihetsika virtoaly virtoaly, ny lisitry ny faniriany, ny ankamaroany tsokajiny tsara amin'ny orinasa marika manokana, ary ny antony hafa. Ity algorithm fampandrenesana ity dia antsoina hoe "singa ho an'ny sivana amin'ny fiaraha-miasa." Amin'ny ankapobeny, io rafitra sosokevitra io dia manamboatra ny traikefa amin'ny fikirakirana ho an'ny mpanjifa miverina.
Ny fivoaran'ny Amazon amin'ny varotra mivantana dia miankina amin'ny fomba amazonan'i Amazon ny soso-kevitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny akora tranaona avy amin'ny vokatra finday amin'ny karajia.
Araka ny nolazain'ny solontenan'ny Amazon: "Ny iraka ataontsika dia ny hankafizantsika ny mpanjifantsika amin'ny famelana azy ireo hamantatra ireo vokatra goavana amin'ny fahamendrehana. Mino izahay fa mitranga isaky ny andro iray izany ary izany no fomba goavana indrindra amin'ny fahombiazana. "
Ambany kokoa, Amazon dia manome toro-marika amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny tsara indrindra amin'izany dia ny mailaka mitodika manokana na dia misy aza ny olona afaka mahazo azy. Ny mailaka Amazon dia mifototra amin'ny fitakian'ny mpanjifa sy ny fikarakarana.
Ankoatra ny fanatsarana ny fahamarinan'ny fanoloran-tena, Amazon dia mandinika tsy tapaka ny fomba vaovao hahatongavana amin'ireo mpividy tsy tapaka. Efa nanomboka nivarotra amboara ny vokatra efa nividianana an-tsokosoko ny Amazon, izay sarotra loatra ny sambo amin'ny sambo tsirairay. Ny mpanjifany dia afaka mandidy ireto zavatra ireto fa tsy raha mihoatra ny 25 $ ny fividianana azy. Ny vokatra azo dia azo atao amim-pahamendrehana raha toa ka mandalo izany lozam-pifamoivoizana izany ny baiko.
Taorian'izay, ny mpikaroka amazon-dry Amazon dia nanome vokatra bebe kokoa izay mitondra tombony bebe kokoa ho an'i Amazon.
Manao ahoana ny milina fanoloana an'i Amazon?
Maro ny adihevitra manodidina ity lohahevitra ity ao amin'ny tranonkala, ary samy hafa ny eritreritry ny mpivarotra. Andeha isika hiteny ihany amin'ny teny sasany amin'ity fanontaniana ity.
Ny fisivanina fiaraha-miasa am-piaraha-monina Amazona amin'ny ambaratonga Amazon dia mampihena an'arivony mpanjifa sy vokatra. Izany dia mamolavola toro-hevitra avo lenta amin'ny fotoana tena izy.
Ny fisivanan'i Amazon dia mifanandrify amin'ny vokatra mitovy amin'ny vokatra mitovy amin'ny mpividy ary nomeny vokatra. Amin'ny dingana faharoa, mifanaraka amin'ny vokatra mitovy ho lasa lisitra fanolorana ny mpampiasa izany.
Ny rafitra sosokevitra Amazon dia fomba mahomby hamoronana traikefa amin'ny fividianana manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay izay manampy ny Amazon hampitombo ny lanjan'ny lanjany sy ny tombony avy amin'ny tsirairay avy.
Araka ny asehon'ireo antontan'isa ofisialin'ny Amazon, ny rafitra sosokevitra dia miasa. Araka ny tatitra nataon'ny orinasa, ny salan-drivotra midadasika dia nitombo ho 12,83 miliara dolara nandritra ny fizaran-taona faharoa, hatramin'ny 9.9 lavitrisa dolara tamin'ny taona lasa. Ny fidiram-bolan'ny Amazon ho an'ny taon-dasa dia mampiseho ny tombotsoa avo indrindra amin'ny toro-hevitra tafiditra ao anatin'ny dingana rehetra amin'ny fividianana fividianana Source .